Eyona Cordyceps yoMkhosi yoKhupha iPowder yoMvelisi kunye neFektri | Umthetho
I-Cordyceps, eyaziwa ngokuba yi-Cordyceps militaris, yinkimbinkimbi yefungus Cordyceps miltaris parasitic kwimibungu ye-bat moth lavae kunye nemibungu yayo. Iicordyceps ezilinywe ngumntu zinokwahlulwa zibe ziindidi ezimbini.
Umzimba weziqhamo we-remella → Sila (ngaphezulu kwama-50 meshes) → Thatha (amanzi acociweyo ayi-100 hours iiyure ezintathu, amaxesha amathathu) → concente → ukumisa ukutshiza → Uvavanyo loMgangatho
Ukutya, amayeza, icandelo leCosmetic
● ECanada ● EMelika ● EMzantsi Merika ● Ostreliya ● EKorea ● EJapan ● ERashiya ● EAsia ● EUnited Kingdom ● ESpeyin ● EAfrika
● Iqela leengcali kwiingxelo ezi-2 iiyure.
● Umzi-mveliso oqinisekisiweyo we-GMP, inkqubo yemveliso ephicothiweyo.
● Isampulu (10-25grams) ziyafumaneka ukuze kuhlolwe umgangatho.
● Ixesha lokuhambisa ngokukhawuleza ngaphakathi kweentsuku eziyi-1-3 zomsebenzi emva kokufumana intlawulo.
● Ukuxhasa abathengi kwimveliso entsha yeR & D.
● Inkonzo ye-OEM.
1. I-cordycepin eCordyceps yintsholongwane enamandla kakhulu, inxamnye nomhlaza kunye neziyobisi ezichasayo.
2. IiPolysaccharides ezikwiCordyceps zinokulawula ukungakhuseleki, ukuzikhusela kwizidumbu kwaye zincede ekulweni nokudinwa. Inemisebenzi yokuchasana nobudala, i-antioxidation, ukunciphisa iswekile yegazi kunye nezinye iziphumo.
3. I-Cordyceps acid kwiCordyceps inokuphakamisa imetabolism yomntu, iphucule i-microcirculation, ithintele kwaye inyange i-cerebral thrombosis, i-cerebral hemorrhage, i-myocardial infarction njalo njalo.
Egqithileyo I-Chaga ikhupha i-Powder Bag ye-Mushroom Supplements
Okulandelayo: I-Maitake mushroom Khipha iiPowder zeKhowa yeziXhobo zeMushroom
Chaga Khipha Powder
Hericium Caphula Powder
Iingonyama Mane Ukukhupha iPowder
I-Reishi Mushroom Khipha iPowder
Shiitake Mushroom Khipha iPowder